बाँकेमा निषेधाज्ञाको एकमहिनामा घट्यो मृत्यु दर – Lumbini Live
नेपालगन्ज । बाँकेमा निषेधाज्ञाको महिना दिन बित्दा संक्रमितको मृत्युदरमा कमि आएको छ । गएराती अस्पतालमा भर्ना भएका तीन सङ्क्रमितकोमात्रै उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।
भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज र शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा भर्ना भएका दाङ, कैलाली र सल्यानका कोरोना सङ्क्रमितको उपचारको क्रममा गएराती मृत्यु भएको हो । दैनिक दर्जनौको संख्यामा हुने मृत्युदर घटेर तीनजनामा आएको छ । त्यसमा पनि बाँकेको नहुनु सकारात्मक कुरा भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका स्रोत व्यक्ति तेज वलीले जानकारी दिनुभयो ।
बाँकेमा कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि स्थानीय प्रशासनले एकमहिना अगाडि गत वैशाख ९ गतेदेखि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट निषेधाज्ञा शुरु गरेको थियो । गएराती भेरी अस्पतालमा बैशाख १६ गते भर्ना हुनुभएका कैलाली टीकापुर नगरपालिका वडा नं. ७ निवासी ३५ वर्षीय पुरुष र जेठ ६ गते भर्ना हुनुभएका दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ निवासी ४५ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको हो ।
यसैगरी शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा जेठ ४ गते भर्ना हुनुभएका सल्यान शारदा नगरपालिका वडा नं. १ निवासी ५० वर्षीय पुरुषको पनि उपचारको क्रममा गएराती मृत्यु भएको छ । योसँगै बाँकेमा कोरोनाको उपचार गराउन आउँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २ सय ४० र बाँके जिल्लाका २ सय ७३ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका स्रोत व्यक्ति वलीले जानकारी दिनुभयो ।